Iindaba - Yeyiphi eyona Bhranti yaNgaphandle idumileyo eMhlabeni?
Yeyiphi eyona Bhranti yaNgaphandle idumileyo eMhlabeni?
IArc 'Teryx （Canada): Uphawu lwangaphandle oluphezulu lwaseCanada, olusekwe eVANCOUVER, eCanada ngo-1989, ikomkhulu lalo, istudiyo sokuyila, kunye nomgca wokuvelisa ophambili useVancouver. Ngenxa yokuphambuka kokuphamba ngobugcisa obutsha kunye neetekhnoloji ezintsha, kwisithuba nje esingaphezulu kweminyaka elishumi, ikhule yaziwa njengeMntla Melika kunye nophawu lwangaphandle oluphambili kwihlabathi, kunye neemveliso ezilungileyo kwicandelo lempahla noobhaka. Iimveliso zalo zibandakanyeka ikakhulu ekuhambeni intaba, ukunyuka kunye nomdlalo weqhwa kunye nekhephu, oobhaka, iimpahla, ingqalelo kwiinkcukacha.
Iphakethe enkulu (eJamani): ibhegi yokulala ubhaka.
I-Columbia (United States): uphawu lokuqala lwangaphandle e-United States, iidyasi, iminqwazi yemvula, ibhulukhwe yangaphandle kunye nezixhobo, izixhobo zomoya, izikipa, iihempe, iibhulukhwe ezisebenzayo, oobhaka, izihlangu kunye nokunxiba ii-ski, njl.
Isikhumba sikaJack Wolf (eJamani): uphawu lokuqala lwangaphandle. Oobhaka, izihlangu zangaphandle, iintente, iibhegi zokulala, iimpahla ezahlukeneyo kunye nezixhobo, njl.
I-Lafuma (eFrance): oobhaka abadumileyo baseFransi, izihlangu zangaphandle, iintente, iibhegi zokulala, iimpahla ezahlukeneyo zokuhamba kunye nezinye izinto, izinto zokukhempisha, njl.
I-LL Bean (i-USA): ithengisa iintlobo ngeentlobo zeemveliso zokuzonwabisa, kunye nezixhobo zangaphandle. Zonke iimveliso zayo zithengiswa nge-imeyile kunye nokuthengiswa ngokuthe ngqo kwi-Intanethi, ngaphandle kweearhente.
IMarmot (eUnited States): iimpahla zekhephu, iingxowa zokulala ezantsi, kunye neentente zengqungquthela zithandwa phakathi kwabathandi beentaba.
I-Hardware yeNtaba (i-USA): iimpahla zangaphandle, iintente, ezona nkcukacha zibalaseleyo, inkokheli kwimpahla yangaphandle.
IPatagonia (eUnited States): IPATAGONIA yenye yezona mpahla zinkulu zangaphandle eUnited States naseYurophu, kwaye ineevenkile ezininzi zeefranchise kwihlabathi liphela. I-PATAGONIA kunqabile ukuba izaphulelo, ezamnceda ukuba azenzele umfanekiso ophakamileyo. Iimveliso zikaPatagonia zidume kwihlabathi liphela ngokugxila kukhuseleko lwendalo kunye nolondolozo lwezixhobo. Uyilo olukhokelayo lwePatagonia kunye neemfuno zomgangatho ofunekayo zenza ukuba iimveliso zayo ziphumelele amabhaso amaninzi kuvavanyo lwezixhobo zangaphandle kwimithombo yeendaba, kwaye zikalwe njengenye yeempawu ezithandwayo ngabantu abathanda ngaphandle. Ukunxitywa kwempahla yayo kungcono kunezinye iimveliso zangaphandle, kwaye iinkcukacha zikwangcono. Iimveliso zoboya zithandwa kakhulu.
UVaude (eJamani): iimveliso zibandakanya phantse zonke iimveliso zangaphandle. Ngokwempahla, inezinto zayo ezinelungelo elilodwa lomenzi wayo.
Ubuso boMntla (i-USA): iimveliso zihlala ixesha elide, kwaye ziye zatshintsha ukusuka kwiimveliso eziphezulu ukuya kwiimveliso ezithandwayo.
I-T'tiss (, eJamani): I-T-shirts, ihempe, iibhatyi, iibhulukhwe eziqhelekileyo, njl.